Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 17, 2020 00: 35 No Comments
Adeegga macaamiisha KongoLosolo Inc. ayaa u soo diri doonta lambar ka kooban US $ 25 4-ta qof ee ugu horreysa ee jawaabta saxda ah bixiya. Kadib ku siisay jawaabta saxda ah, fadlan nala soo xiriir sanduuqa de (KongoLisolo Inc.) ama noogu soo qor emayl ahaan: adeegga macaamiisha @kongolisolo.co. Waxaan kula soo xiriiri doonaa sanduuqa si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Waa tan su'aasheena: “Maxaa loo yaqaan gacan ku dhiiglaha Laurent-Désiré? Kabila taariikhdee iyo goortee dilkan uu dhacay ?? »
Oct25 04: 01